Lafaoro voasokajy araka ny fampiasana
Zava-pisotro sy divay
Solika azo hanina
Tea & Kafe tins
Vitsika mpandrava vitsika
Moteur Oil & lubricant tins
Boatin'ny vifotsy voasokajy araka ny endriny
Boaty boribory boribory
Boaty tsy ara-dalàna
Boaty fanitso efamira sy mahitsizoro
Nahoana no Tin Packaging
Nahoana i Byland no afaka
Inona no tombony azo amin'ny fametahana kapoaka sakafo?
Inona no tombony azo amin'ny fametahana kapoaka sakafo? Satria ny vifotsy dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fisorohana ny harafesina sy ny harafesina, dia manambatra ny tanjaka sy ny endrika ny vy miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina, ny lasantsy ary ny estetika amin'ny akora iray, izay manana fanoherana tsara sy ductility. Ny...
Ny kapoaka tinplate dia mahafeno ny fironana vokatra ho avy
Ny kaontenera efa misy dia ny kaontenera vy, kaontenera aluminium, kaontenera taratasy ary plastika. Ireo kaontenera ireo dia manana toetra fanodinana fanarenana hafa, fa ny fanodinana ny kaontenera vy dia tsara kokoa noho ny fitahirizana entana hafa. Araka ny tatitry ny fitantanana ny tontolo iainana iraisam-pirenena...
Nahoana no fenoina anaty vilia vilia ireo baoritra lehibe misy biscuit?
Tsy mety vita ilay baoritra lehibe misy biscuit, ary te hanary azy ianao nefa tsy zakanao. Avy eo dia maneho ny tombony azo amin'ny tinplate kapoaka. Raha tsy fantatrao ny momba izany dia tongava mijery. Raha jerena ny fonosana dia lehibe noho ny baoritra, sa tsy izany?...
Tombontsoa ara-tontolo iainana amin'ny fonosana tinplate
Ny antony lehibe mahatonga ny boaty tinplate ho tsara indrindra amin'ny karazana fonosana rehetra tato anatin'ny taona vitsivitsy dia ny fahombiazany, ny haingo matanjaka, ny vidiny ambany ary ny kalitao tsara sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny fonosana boaty fanitso dia ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, fanafody ary fikarakarana ara-pahasalamana. Sakafo, t...
Nahoana no ampiasaina amin'ny kapoaka maro ny vilia vy?
Nahoana no ampiasaina amin'ny sakafo am-bifotsy ny kapoaka vita amin'ny tavoahangy? Ny fonosana sakafo am-bifotsy dia azo zaraina ho karazany roa: kojakoja fitaratra sy kapoaka. Amin'ny ankapobeny, 8 volana eo ho eo ny androm-piainan'ny vera ary mora mifoka hafanana avy amin'ny hazavana. Rehefa elaela dia ho mainty ny sakafo ao anaty kapoaka; ary ny s...
Inona no soa azo avy amin'ny fampiasana vata fanitso sy famonosana kapoaka ho an'ny vatan'olombelona?
Amin'ny fiaraha-monina ankehitriny, saika nibodo ny indostria rehetra ny boaty fanitso sy ny famonosana kapoaka. Manomboka amin'ny vata fanitso sakafo, vata fanitso fanafody ka hatramin'ny vata fanitso kosmetika, dia hitantsika na aiza na aiza eo amin'ny fiainantsika. Ny antony iray dia ny vata fanitso sy ny kapoaka. Fiarovana ny tontolo iainana, iray hafa noho ny naoty sy ny tran...
Nahoana no feno biscuit ny baoritra lehibe...
Tombontsoa ara-tontolo iainana ny fonosana tinplate...
Boatin'ny mpifankatia ho an'ny sipa, Cd Bags & Cases, Ring Pull Can Opener Claw, Boatin'omby manokana, Harona fitahirizana metaly misy sarony, Tea Tin Box,